Mindmapping 101: Mkpụrụ Mindmapping | Martech Zone
Saturday, March 30, 2013 Saturday, March 30, 2013 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya anyị debanyere aha maka ịntanetị nke Mindjet, onye ahịa anyị na onye nkwado teknụzụ na Martech. Ha nwere 25% kwụsịrị pụrụ iche na-agba ọsọ site na izu ụka! Adị m ọhụrụ icheta ncheta wee hụ ihe dị egwu echetara m Maapụ maka Nke ahụ na-egosi ụkpụrụ nke Mindmapping.
Ihe kachasị masị m banyere ịtụgharị uche bụ na m nwere ike ịhazi echiche m ọsọ ọsọ n'usoro nhazi ka ọ bụrụ ọkwa zuru oke. Nke a mindmap agagharị mere ndị folks jiri mindmaps na otu ha si baa uru n'akụkụ aka ekpe na n'akụkụ aka nri, otu esi amalite ịchepụta uche gị na otu esi eji ngwaọrụ niile ịiche ọdịiche nke ngalaba, isiokwu, subtopics na omume. Mindjet na-enye gị ohere ijikọ alaka ahụ, tinye ọrụ, yana ịkekọrịta ma rụkọta ọrụ na ndị otu.
N'ime oru ahia anyi, anyi etinyego mindmaps ka brainstorm, nyefee nchọpụta isiokwu, ịme atụmatụ mkpọsa, mepee atụmatụ ngwanrọ, ma dee otu azụmahịa anyị si arụ ọrụ n'ozuzu ya. Ọ bụ teknụzụ na-eri ahụ - na-echekwa oge yana map ndị na-emepe emepe nke na-akọwa nke ọma atụmatụ gị ma ọ bụ usoro gị.
Nke a bụ vidiyo mmalite mmalite gbasara otu ndị folks si eji Mindjet wee zụlite uche:
Tags: esi eche echicheMindjetmap ucheitinye ucheụkpụrụ ntinye uche
Nnyocha e mere: Colnakọta ma ọ bụ Nnukwu Aka?